ခရီးသွားမော်ကွန်းတိုက် | စာမျက်နှာ2၏4| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အင်တာနက်ကိုနေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်. အင်တာနက်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းထားပြီးကျနော်တို့မရှိတော့အင်တာနက်ကိုမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာစိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်မပြောတတ်တောင်မှအဖြစ်. လက်တွေ့မပါသည့်နည်းပညာအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်နေဆဲသောငါတို့ဘဝတွေကို၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်အင်တာနက်ရှိပါတယ်. This has especially been a…